लाली लागू गर्नुहोस् - कसरी यो तपाइँको अनुहार अनुसार गर्न को लागी बेजिया
सुसाना Godoy | 15/09/2021 12:00 | सुन्दरता
तपाइँलाई थाहा छ कसरी लाली लागू गर्ने? यो साँच्चै केहि धेरै सरल लाग्दछ र यो होइन कि हामी आफैंलाई धेरै जटिल बनाउनु पर्छ, तर कहिले काहिँ यदि हामी उचित चरणहरु को पालन गर्दैनौं, नतिजा या त हुन सक्दैन। तेसैले, यो समय हामी जान्दछौं कि हामी अनुहार को प्रकार अनुसार हामी के गर्नुपर्छ।
किनकि हामी के चाहन्छौं सधैं हुन्छ हाम्रो सबै भन्दा राम्रो अंक र भागहरु हाइलाइट गर्नुहोस्, त्यसैले यस को लागी हामी सबै भन्दा राम्रो सल्लाह को जरूरत छ। सायद तपाइँ सोच्नुभएको थियो कि लाली धेरै विज्ञान थिएन जब यो लागू गर्न को लागी आयो, तर तपाइँ देख्नुहुनेछ कि यो पनि यसको सानो चाल छ। तेसैले, आफैंलाई ती सबै बाट टाढा लैजान दिनुहोस् र तपाइँ ती महान नतीजाहरु देख्नुहुनेछ जुन तपाइँले आशा गर्नुभयो।
1 एक वर्ग अनुहार मा लाली कसरी लागू गर्ने
2 अण्डाकार अनुहार मा लाली कसरी लागू गर्ने
3 गोल अनुहार मा लाली लागू गर्नुहोस्
4 धेरै लामो अनुहार को लागी
5 त्रिकोणीय अनुहार
एक वर्ग अनुहार मा लाली कसरी लागू गर्ने
हामी वर्ग अनुहार संग शुरू, जो एक काफी चिह्नित र कोणीय जबडा संग एक छ। उस्तै तरिका मा, तपाइँको cheekbones काफी प्रमुख हुनेछ र यो मतलब छ कि हामी चरणहरु को एक श्रृंखला को पालन गर्न को लागी लाली लागू गर्न को लागी हो। जब देखि हामी यो चाहान्छौं, यो एक अनुहार को लागी एक मिठाई समाप्त गर्न को लागी कडा भनिन्छ। तर, हामी cheekbone को लागी हेर्न जाँदैछौं र हामी यसको माथिल्लो भाग हाइलाइट गर्नेछौं। यो त्यहाँ हुनेछ जहाँ हामी लाली लागू गर्छौं तर सधैं बाहिरी भाग को लागी। राम्रो संग मिश्रण गर्न को लागी क्षेत्र मा केहि परिपत्र आन्दोलनहरु बनाउनुहोस् र तपाइँ कसरी धेरै युवा स्पर्श सेकेन्ड को एक मामला मा प्रस्तुत गरीएको छ देख्नुहुनेछ।
अण्डाकार अनुहार मा लाली कसरी लागू गर्ने
यो पनि काफी सामान्य अनुहारहरु को एक हो र यस मामला मा, यो भन्नु पर्छ कि उनीहरु को गालाको हड्डी ठुलो क्षेत्र र माथे भन्दा व्यापक भाग हो। तेसैले, यो यो स्पष्ट छ कि यो पहिले नै cheekbones बृद्धि गर्न को लागी जाँदैछ, यसैले यो विशिष्टता हामीलाई कसरी लाली राख्ने आश्चर्य छ। सत्य यो हो कि यो पनि एक सरल कदम हो र त्यो हो, हामी क्षेत्र को विस्तार गर्नेछौं र हामी यो गाला मा सबै राख्छौं, सट्टा cheekbone को भाग को सट्टा। तर हो, राम्रो संग धमिलो र हल्का रंगहरु जस्तै आडू कि सधैं महान मनपर्ने मध्ये एक हो। रंग बनाउन को लागी केन्द्र बाट नजिकैको क्षेत्रहरुमा जाने कोसिस गर्नुहोस्।
गोल अनुहार मा लाली लागू गर्नुहोस्
जब हामी गोल अनुहार को बारे मा कुरा गर्छौं, हामी ती उल्लेख गर्दछौं कि उचाई र चौडाई मा एक धेरै समान दूरी छ, त्यसैले कोणीय भागहरु त्यागिएको हो तर हो, cheekbones सामान्यतया एक बिट चौडा छन्। तेसैले कसरी लाश लागू गर्न को लागी हामीलाई हाम्रो सुन्दरता लाई हाइलाइट गर्न को लागी धेरै सजिलो छ। यस मामला मा यो सबै भन्दा राम्रो छ यो मात्र तपाइँको cheekbone को हड्डी तल लागू गर्नुहोस् र गाला को भाग बाट बच्न। यो राम्रो छ कि तपाइँ यसलाई एक आरोही तरीका मा गर्नुहुन्छ जस्तै रंग मन्दिरहरुमा पुग्न जाँदैछ। किनभने यो यो क्षेत्र लम्बाउने तरिका हो।
धेरै लामो अनुहार को लागी
यस प्रकारको अनुहारले ठुलोलाई एक अधिक लम्बाई र साँघुरो आकृति बनाउँछ, जुन अधिक प्रमुख हुन्छ। तर यो सत्य हो कि संकुचन मा गालाको हड्डीहरु पनि बाहिर खडा हुन्छन्। किनकि, यो तेर्सो रेखा को एक प्रकार छ कि लगभग कान सम्म पुग्न को लागी नाक को क्षेत्र बाट जान्छ को लागी सुविधाजनक छ। किनकि यो लम्बाई छ कि यो अनुहार छ छोटो छ र यो छोटो संग भंग गर्न को लागी एक तरीका हो, भले ही यो अप्टिकल प्रभाव को स्तर मा छ।
यो सामान्यतया पातलो अनुहार हो जसमा निधार साँघुरो हुन्छ तर जबडा चौडा हुन्छ। तेसैले, क्रम मा यी सबै क्षेत्रहरुमा थोरै सन्तुलन मिलाउनुहोस् हामी ब्लश सही तरीकाले लागू गर्न जाँदैछौं। यस मामला मा हामी cheekbone को माथिल्लो भाग मा रेखा को एक प्रकार को बनाउनेछौं। केहि त्यो पनि वर्ग प्रकार अनुहार संग भयो। तपाइँ सधैं गालाको हड्डी को प्राकृतिक लाइन को पालन गर्नु पर्छ। अब तपाइँ अब तपाइँको अनुहार हाइलाइट गर्न को लागी बहाना छैन!
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सुन्दरता » तपाइँको अनुहार अनुसार लाली कसरी लागू गर्ने
कुकुर भएको बच्चाहरु को लागी ठूलो लाभ